၂၀၁၈ Billboard Music Awards ဆန်ကာတင် စာရင်း ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
17 Apr 2018 . 9:54 PM
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Billboard ဂီတဆုပေးပွဲကြီးကိုတော့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ NBC ကနေ ပြသပါတော့မယ်။ အခုဆိုရင် ဒီဆုပေးပွဲအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Ed sheeran နဲ့ Taylor Swift တို့လည်း ပါသလို အခြားဘယ်သူတွေ ပါသေးလဲဆိုတာ ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဒီနှစ်အတွက် Top Artist ( ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်) စာရင်းကတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကြီးပါပဲ။
ထိပ်တန်းအမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ဆုမှာတော့ Camila Cabello နဲ့ Cardi B တို့ ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
Post Malone ကိုလည်း ထိပ်တန်းအမျိုးသားအနုပညာရှင်စာရင်းမှာ တွေ့ရမှာပါ။
အရောင်းရဆုံး Album စာရင်းထဲမှာတော့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း Ed Sheeran ရဲ့ Divide နဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Reputation တို့ ပါဝင်လာပါတယ်။
Despacito ကြီးကလည်း ရိုးရာမပျက်ပါသလို Post Malone ရဲ့ Rockstar သီချင်းလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
Top Country SongKane Brown, ” What Ifs (feat. Lauren Alaina)”
ဒီဆုမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းအရ ရောင်းရတဲ့ သီချင်းတွေ၊ ရေဒီယိုက လွှင့်ရတာတွေ၊ ရှိုးပွဲတွေ၊ Social Engagement တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လလုံး စာရင်းကောက်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Billboards Music Awards ကို Las Vegas မှာရှိတဲ့ MGM Grand ကနေပြီး မေလ ၂၀ ရက် ည ၈နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုပေးပွဲကို ၃နာရီကြာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးတွေ၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပူးတွဲဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲတက်လက်မှတ်တွေကိုတော့ ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေရမလဲဆိုတာတော့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက်ရှုစားကြရမှာပါ။
*ဓာတ်ပုံကိုတော့ Taylor Swift နဲ့ Ed Sheeran ရဲ့ အရင်က ပုံအဟောင်းကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ Billboard Music Awards ဆနျကာတငျ စာရငျး ထှကျပျေါလာပါပွီ
ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာ Billboard ဂီတဆုပေးပှဲကွီးကိုတော့ မလေ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ NBC ကနေ ပွသပါတော့မယျ။ အခုဆိုရငျ ဒီဆုပေးပှဲအတှကျ ဆနျကာတငျစာရငျးတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပွီး နာမညျကွီးတှေ ဖွဈတဲ့ Ed sheeran နဲ့ Taylor Swift တို့လညျး ပါသလို အခွားဘယျသူတှေ ပါသေးလဲဆိုတာ ဒီမှာ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
ဒီနှဈအတှကျ Top Artist ( ထိပျတနျးအနုပညာရှငျ) စာရငျးကတော့ ဒိတျဒိတျကွဲတှကွေီးပါပဲ။
ထိပျတနျးအမြိုးသမီး အနုပညာရှငျဆုမှာတော့ Camila Cabello နဲ့ Cardi B တို့ ပါဝငျလာတာ တှရေ့ပါတယျ။
Post Malone ကိုလညျး ထိပျတနျးအမြိုးသားအနုပညာရှငျစာရငျးမှာ တှရေ့မှာပါ။
အရောငျးရဆုံး Album စာရငျးထဲမှာတော့ ထငျထားတဲ့အတိုငျး Ed Sheeran ရဲ့ Divide နဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Reputation တို့ ပါဝငျလာပါတယျ။
Despacito ကွီးကလညျး ရိုးရာမပကျြပါသလို Post Malone ရဲ့ Rockstar သီခငျြးလညျး ပါဝငျလာပါတယျ။
ဒီဆုမှာ ပါဝငျတဲ့သူတှဟော ဒဈဂဈြတယျနညျးအရ ရောငျးရတဲ့ သီခငျြးတှေ၊ ရဒေီယိုက လှငျ့ရတာတှေ၊ ရှိုးပှဲတှေ၊ Social Engagement တှကေို ပွီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လလုံး စာရငျးကောကျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှပေျေါ မူတညျပွီး သတျမှတျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Billboards Music Awards ကို Las Vegas မှာရှိတဲ့ MGM Grand ကနပွေီး မလေ ၂၀ ရကျ ည ၈နာရီမှာ ထုတျလှငျ့ပွသသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုပေးပှဲကို ၃နာရီကွာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး နာမညျကွီးတှရေဲ့ ဖြျောဖွရေေးတှေ၊ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ပူးတှဲဖြျောဖွမှေုတှနေဲ့ မွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပွီး ပှဲတကျလကျမှတျတှကေိုတော့ ရောငျးခပြေးနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဘယျသူတှရေမလဲဆိုတာတော့ မလေ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ဆကျလကျရှုစားကွရမှာပါ။
*ဓာတျပုံကိုတော့ Taylor Swift နဲ့ Ed Sheeran ရဲ့ အရငျက ပုံအဟောငျးကို အသုံးပွုထားတာ ဖွဈပါတယျ။